helping - MYSTERY ZILLION
i want to know the methods of kills virus
Some anti-virus softwares can't kills some virus
:14:So,i very downhearted about it?
Some virus that's can't kills by anti virus-software
that can kill by command .
please tell me the methods to kills virus by command.
mz all members
Forum -> ကြော်ငြာချက် -> မသိမဖြစ် ထဲမှာ မေးထားလို့ ဒီကိုရွေ့ထားပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာနေရာမှာ ကြိုးစားပြီးတော့ မေးပါ။
လောလောဆယ်ဆယ် နာမည်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် လက်ရှိ သုံးနေတာကတော့ Kaspersky Antivirus ဖြစ်ပါတယ်... Kaspersky Internetsecurity ဆိုပြီးတော့လည်း ထွက်ပါသေး..
တချို့ Antivirus တွေက Virus ကိုမသိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖြစ်နိုင်တာက ။
Virus Definition update မဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
Virus ကိုက အသစ်ဖြစ်နေလို့ Update မထွက်သေးတာ../ ပြည်တွင်းမှာ သီးသန့် လက်စမ်းထားတဲ့ Virus ဖြစ်နေလို့ ပြန့်ပွားနှုန်းနည်းပြီး Update မရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်..
ဒါမှမဟုတ် Antivirus Software ကိုက အဆင့်အတန်းမမီတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
အမြဲ Update ဖြစ်အောင်ထားပါ...
Flash Disk , Flash Card, Floppy, MP3/MP4 player အစရှိတာတွေကို အသွင်းအထုတ် ပြုလုပ်ရာမှာ သတိကြီးစွာထားပါ.. Auto Run စနစ်နဲ့ မဖွင့်ပါနဲ့ မစစ်ဆေးပဲ Double မ Click ပါနဲ့.. Virus အသစ်ဖြစ်နေမှာကို စိုးရတဲ့အတွက် .. Winrar လို Software ကိုသုံးပြီး Disk ကို Browse လုပ်ကြည့်ပါ.. ကိုယ်မသိတဲ့ဖိုင်တွေကို ဖျက်ပစ်ပါ.. ပြီးရင် ပြန် ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်ပါ.. Windows Explorer နဲ့ Explorer လုပ်ပါ မိမိဖွင့်ချင်တဲ့ဖိုင်ကိုသာ Direct Click ပြီး ကော်ပီကူးတာတို့ ဖွင့်တာတို့ကိုလုပ်ပါ.. Ctrl + A လို သုံးပြီး အားလုံးရွေးချယ်ကူးယူတာမျိုးရှောင်ပါ..
Virus ကို Command သုံးပြီး သတ်ဖို့ဆိုတာက ဘာဗိုင်းရပ်စ်၀င်နေလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်.. ပြီးရင် သူ့ရဲ့ အဖော်တွေ ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိဖို့လိုတယ်.. ပြောရရင်တော့ အများကြီးပဲ .. မလွယ်ဘူးလို့သာပြောပါရစေ... ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်သာ အများအားဖြင့် လုံခြုံနိုင်ပါမယ်...